Le patent isibonisa indlela ekulindeleke ngayo ukuba i-Samsung Galaxy X isebenze | Iindaba zeGajethi
UJuan Luis Arboledas | | Iiselfowuni, Te knoloji
Zininzi iinyanga ezithi, phantse kuyo yonke indawo, zisithabathe ngolwazi, imifanekiso kunye nazo zonke iintlobo zeenkcukacha apho sinokubona ukuba into ekuthiwa intsha iza kusebenza njani Ifowuni ye-samsung enokusongwa. Kubonakala ngathi, ngaphandle kwalo lonke olu lwazi, ngoku kuxa sinokuthi sithethe ngento ethile enombulelo ngakumbi kwilungelo elilodwa lomenzi wechiza elisibonisa ukuba le fowuni intsha iza kusebenza njani.
Njengangaphambili, xelela ukuba le patent yanikwa inkampani yaseKorea nge-2 kaMeyi, ke, ngaphandle kwemithombo emininzi ibanga ukuba inolwazi olukhethekileyo, inyani kukuba, njengoko kuhlala kusenzeka, asinakuqinisekisa nantoni na 100%. Kude kuyo yonke le nto, inyani kukuba siyazi ukuba i-Samsung isebenza kwisiphelo esitsha sezi mpawu, ezisekwe kwimifanekiso ebonakalisiweyo, ngokuqinisekileyo iyakumangalisa.
I-Samsung Galaxy X entsha inokusongwa ibe ziinxalenye ezintathu kwaye kungabi ngamabini nje njengoko bekukho amahemuhemu kude kube ngoku
Njengokuba bekukho amahemuhemu ukuza kuthi ga ngoku, i-Samsung Galaxy X entsha iya kuba sisiphelo esineyona nto iphambili kunye neyona nto ibalulekileyo iya kuba yinto enokuthi isongwe ngesiqingatha. Ngoku, njengoko zibonakala kwimifanekiso ethi le patent isishiye, sithetha ngesiphelo esigqibeleleyo inokugoqwa ibe ziinxalenye ezintathu. Okwangoku kukukhumbuza ukuba, ngaphandle kokuba kukho ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, oko akuthethi ukuba i-Samsung isebenza kuphuhliso kunye nasekwenzeni esi sixhobo kuba bekungayi kuba kokokuqala ukuba, ngaphandle kwelungelo elilodwa lomenzi, ezi zixhobo ekugqibeleni ziyakwenza ayizukufika kwimveliso.
Nangona kunjalo, kwaye ukuze ungaphoxi mntu, kuyinyani ukuba le patent iyenza icace into enye kuthi kwaye, ngaphandle kobunzima obukhulu bezobuchwephesha obunokubonakaliswa sisiphelo esinjengalesi, ilungelo lomenzi liyayenza icace gca into yokuba Isamsung inomdla kule nto intsha yesixhobo esiphathwayo, kakhulu ukuqala ukuphanda okunokwenzeka kwaye ndisebenze nakwiiprototypes zokuqala. Ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqwalasele umbono wokuba iSamsung inesixhobo esinjengale:
Njengoko ubona kulo mfanekiso wokuqala, i-Samsung Galaxy X iya kuziswa njengayo nayiphi na enye i-smartphone esinokuyifumana kwintengiso yanamhlanje.
Eyona nto iphambili eya kuthi ibonakaliswe kuyilo lwesi sixhobo kukuba iya kusongwa kanye kwisiqingatha.
Enkosi kwinto yokuba isongelwe kanye embindini wesikrini sayo, oku kuya kuvumela abasebenzisi ukuba basebenze ngoqwalaselo lwescreen sokuqhekeka ukuze isicelo sikwazi ukuthatha isiqingatha sescreen sishiya inxenye eseleyo ukuba sikwazi ukusetyenziswa. kolunye uhlobo lwemisebenzi.
Njengoko kunokubonwa kulo mfanekiso, nangona ungasonga isikrini, oko akuthethi ukuba isicelo ekuthethwa ngaso singeniswa kuphela kwisiqingatha sesikrini, kodwa unokusebenzisa ubumbeko lwescreen esinye kwaye uqhubeke nokubona iscreen esinye kwiscreen siphelele. .
Nje ukuba uthathe isigqibo sokugqiba ukusebenza kwiscreen esinye okanye ezibini, ungasivala ngokupheleleyo ngesixhobo ngokungathi sisipaji.
Ukuvalwa ngokupheleleyo, isakhiwo esicocekileyo ngokupheleleyo siya kuhlala sikhuselwe kwimithambo enokubakho.
Ilungelo elilodwa lomenzi libonisa ukubakho kwesixhobo esinokusongwa kathathu. Uyilo olungavakaliyo kwaphela esingazange sakwazi ukuthetha ngalo ngaphambili kwaye sinika isisombululo esinomdla kubasebenzisi abathile.
Njengoko ubona kumfanekiso obekwe ngaphezulu nje kwale migca, ngaphandle koyilo oluntsonkothileyo, ifowuni inokuphinda isongwe, kukhokelela kumphezulu omenyezelwayo kunye nophantsi.
Ndiyabulela kule ndlela yokusonga, singasebenzisa isixhobo sethu ukubona kuphela isinye kwisithathu sesikrini, into enokuba yinto enomdla kakhulu, umzekelo, xa kufuneka sinikele ingqalelo kuhlobo oluthile lwesaziso okanye umyalezo ngendlela efanelekileyo kakhulu kwaye ngokukhawuleza .
Olu luyilo luya kuvumela umsebenzisi ukuba alusebenzise ngamacandelo amabini kula mathathu, esenza ukuba isiphelo sendlela sikhangeleke ngokungathi siqhotyoshelwe kuhlobo oluthile lwesiseko esime nkqo.
Unokusonga kwimilo engunxantathu ukubonisa kuphela icandelo elinye lesikrini kwindawo emi nkqo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Le patent isibonisa indlela ekulindeleke ngayo ukuba i-Samsung Galaxy X isebenze
I-Nintendo switchch Online iya kugcina ilifu
Inkqubo ye-TRAPPIST-1 iqulethe iplanethi enamathuba amaninzi okusingathwa kobomi